GAROWE, Puntland- Ciidamo katirsan kuwa ammaanka dowladda Puntland ayaa saaka si toos ah magaalo madaxda Puntland ee Garowe ka bilaabay qorshe lagu sugayo ammaanka kaasoo kaduwan kuwii horay uga dhici jiray caasumadda.
Mar qura ayaa saaka la arkay ciidamo taagan dhammaan waddooyinka waaweyn ee magaalada kuwaasoo baarayay dadka iyo dadweynaha.
Taliyaha ciidamada qalabka sida ee Puntland General Siciid Maxamed Xirsi, oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Garowe ayaa faah faahin ka bixiyay howlgalka socda, wuxuuna sheegay inuu la xiriiro shirar ka dhacaya magaalo madaxda.
Siciid Dheere, ayaa xusay in ciidamadan ay samaynayaan howlgal joogta ah oo lagu adkaynayo ammaanka islamarkaana looga hortagayo falalka inta badana sameeyaan kooxaha kasoo horjeeda xasiloonida, wuxuuna intaasi ku daray in amniga Puntland yahay mid aad u wanaagsan.
Ciidamada amniga sugaya ayuu sheegay inay yihiin kuwo aad loo soo wacyi galin islamarkaana xirfad gooni ah u leh shaqada ay qabanayaan.
Wuxuu intaasi ku daray in caasumadda Garowe, tahay meel amnigeeda la sugo waqti kasta, balse qorshahan yimid xilli shirar waaweyn dhici doonaan kuwaasoo qayb ka ah doorashada Somalia ka dhici doonta dabayaaqada sannadka 2016.
Taliyaha ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay qorshaha amniga la xiriira ee kasocda gobolka Mudug, wuxuuna ku macneeyay mid lamid ah kuwa ka dhaca dunida isagoo tallaabada baabuurta lagu kala wareejinayo ku tilmaamay mid amniga Puntland lagu adkaynayo.
Hadalkan ayaa yimid xilli maanta dadka ku dhaqan aad isu weydiinayay baaritaankan aan horay loo arag ee laga samaynayay caasumadda Garowe.
BOSASO, Puntland- Taliyaha guud ee ciidamada Booliiska Puntland Cabdulqaadir Faarax Shire (Ereg), ayaa markii ugu horraysay ka hadlay howlgal amni oo todobaadkii hore ka billowday magaalo madaxda Puntland ee Garowe kaasoo ay fuliyaan ciidamada kumaandoosta iyo kuwa ...
Puntland 18.08.2016. 13:33
​12 qof oo cudur ugu geeriyooday Garowe [Dhagayso]
Puntland 18.02.2017. 11:35
​Shacabka Garowe oo maanta si wanaagsan u ciiday
Islam 12.09.2016. 10:45
​Gabdhaha gobolka Nugal oo Cusbitaal dhisaya [Sawirro]
Puntland 23.08.2016. 19:42